ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာကို ကားငှားနိုင်တော့မယ့် Google Assistant
5 Oct 2018 . 12:32 PM
Google Assistant ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာအကောင်းဆုံးသော Virtual Assistant ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ အခုအချိန်မှာဆိုရင် Google ကနေ အခု Google Assistant ကို ပိုပြီးကောင်းမွန်အောင် Feature အသစ်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းဖို့ ပြုလုပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခု Feature အသစ်ကတော့ ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာကို “Hey Google, Book A Ride” ဒါမှမဟုတ် “Hey Google, Get Me A Taxi To” ဆိုပြိး ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာကို ပြောလိုက်တာနဲ့တင် ကားငှားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး အငှားယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်လည်း Google က Uber ၊ Lyft ၊ Ola ၊ Grab ၊ GO-JECK နဲ့ တခြားသော Service တွေအကုန်လုံးမှာ ရရှိလာမယ်လို့သိရပါတယ်။
အခုလိုမျိုး Google Assistant ကိုပြောလိုက်တာနဲ့ Assistant ကနေ ရရှိနိုင်တဲ့ Service တွေနဲ့ အကြမ်းဖျင်းကျသင့်မယ့် ဝန်ဆောင်ခကို ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အခုလိုမျိုး ရနိုင်သမျှ Service List တွေကို ဖော်ပြတာမျိုးကို မလိုချင်ဘူးဆိုရင်လည်း ကိုယ်ခေါ်ဆိုချင်တဲ့ Service နာမည်ကိုပါ ထည့်သွင်းပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် တခါတည်း ခေါ်ဆိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Google ရဲ့ ပြောကြားချက်အရတော့ အခု Feature ဟာ Android ၊ iPhone ၊ Google Home နဲ့ Google Assistant ပါဝင်တဲ့ Smart Speaker တိုင်းမှာ ရရှိလာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယခင်တုန်းက Google Maps မှာတင် Navigation ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာ Ride Hailing Tab ကို ထည့်သွင်းခဲ့ပြိးတော့ အခုအချိန်မှာတော့ Google Assistant မှာပါ ထည့်သွင်းလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ယခု Feature ကို English ဘာသာစကားနဲ့ Google Assistant ကိုအသုံးပြုနေသူတွေနဲ့ Ride Service Partner တွေရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ အရင်ရရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ နောက်ပိုင်းလတွေမှာ တခြားသောနိုင်ငံတွေကိုပါရရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခု Feature ဟာ Google Assistant အတွက်တော့ တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ Update တစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူတွေကိုလည်း Google Assistant ကို ပိုပြီး အသုံးပြုလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Ref : The Verge
Google Assistant ဟာ လကျရှိအခြိနျမှာအကောငျးဆုံးသော Virtual Assistant ဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး။ အခုအခြိနျမှာဆိုရငျ Google ကနေ အခု Google Assistant ကို ပိုပွီးကောငျးမှနျအောငျ Feature အသဈတဈခုကို ထညျ့သှငျးဖို့ ပွုလုပျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
အခု Feature အသဈကတော့ ကိုယျသှားခငျြတဲ့နရောကို “Hey Google, Book A Ride” ဒါမှမဟုတျ “Hey Google, Get Me A Taxi To” ဆိုပွိး ကိုယျသှားခငျြတဲ့နရောကို ပွောလိုကျတာနဲ့တငျ ကားငှားပေးတော့မှာဖွဈပါတယျ။ အခုလိုမြိုး အငှားယာဉျဝနျဆောငျမှုအတှကျလညျး Google က Uber ၊ Lyft ၊ Ola ၊ Grab ၊ GO-JECK နဲ့ တခွားသော Service တှအေကုနျလုံးမှာ ရရှိလာမယျလို့သိရပါတယျ။
အခုလိုမြိုး Google Assistant ကိုပွောလိုကျတာနဲ့ Assistant ကနေ ရရှိနိုငျတဲ့ Service တှနေဲ့ အကွမျးဖငျြးကသြငျ့မယျ့ ဝနျဆောငျခကို ဖျောပွသှားမှာဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ အခုလိုမြိုး ရနိုငျသမြှ Service List တှကေို ဖျောပွတာမြိုးကို မလိုခငျြဘူးဆိုရငျလညျး ကိုယျချေါဆိုခငျြတဲ့ Service နာမညျကိုပါ ထညျ့သှငျးပွီးပွောလိုကျမယျဆိုရငျ တခါတညျး ချေါဆိုပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
Google ရဲ့ ပွောကွားခကျြအရတော့ အခု Feature ဟာ Android ၊ iPhone ၊ Google Home နဲ့ Google Assistant ပါဝငျတဲ့ Smart Speaker တိုငျးမှာ ရရှိလာမယျလို့ သိရပါတယျ။ ယခငျတုနျးက Google Maps မှာတငျ Navigation ပွုလုပျတဲ့အခြိနျမှာ Ride Hailing Tab ကို ထညျ့သှငျးခဲ့ပွိးတော့ အခုအခြိနျမှာတော့ Google Assistant မှာပါ ထညျ့သှငျးလာတာလညျးဖွဈပါတယျ။
ယခု Feature ကို English ဘာသာစကားနဲ့ Google Assistant ကိုအသုံးပွုနသေူတှနေဲ့ Ride Service Partner တှရှေိတဲ့နိုငျငံတှမှော အရငျရရှိလာမှာဖွဈပွီးတော့ နောကျပိုငျးလတှမှော တခွားသောနိုငျငံတှကေိုပါရရှိအောငျဆောငျရှကျသှားမယျလို့ ပွောကွားခဲ့ပါသေးတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ အခု Feature ဟာ Google Assistant အတှကျတော့ တကယျကိုကွီးမားတဲ့ Update တဈခုဖွဈလာမှာဖွဈပွီး အသုံးပွုသူတှကေိုလညျး Google Assistant ကို ပိုပွီး အသုံးပွုလာစမှောဖွဈပါတယျ။
by Zawyè . 1 day ago
1TB UFS 3.0 Storage ပါဝငျတဲ့ “ASUS ROG Phone II Ultimate Edition” ထှကျရှိ
by Nigma .2weeks ago
ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး Gaming Ultrabook ဖွဈလာတဲ့ Razer Blade Stealth 2019